၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ cloud service အသုံးစရိတ် သည်ဒေါ်လာ ၇. ၃ ဘီလီယံ အထိရောက်ရှိ ခဲ့သည် – Pandaily
Jun 08, 2022, 19:25ညနေ 2022/06/08 23:13:53 Pandaily
Canalys က ဗုဒၶဟူးေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္တရုတ်ပြည်မကြီး ရှိ cloud အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ဆောင်မှု အသုံးစရိတ် သည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၂၁% တိုးတက်ခဲ့ပြီး ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇. ၃ ဘီလီယံ သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ cloud အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးစရိတ် ၏ ၁၃% ခန့်ရှိသည်။
၂၀ ၂၂ မတ်လ မှစ၍ COVID-19 ပြန်လည်နာလန်ထူ မှုသည် စီမံကိန်း အသစ် များနှင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင် နေသော စီမံကိန်း များကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေ ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ cloud အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ဆောင်မှု ဈေးကွက်တွင် ၀ င်ငွေ ကျဆင်း မှုကို ဖြစ်စေသည်။ သို့သော် တရုတ်၏ အခြေခံအဆောက်အအုံ စီမံကိန်း အသစ်များ လျင်မြန်စွာ ဖြန့်ကျက် ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း များ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် အသွင်ပြောင်း မှု အရေးတကြီး လိုအပ် မှု တို့ကြောင့် cloud service provider များသည် ၎င်းတို့၏ အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက် အခွင့်အလမ်း အသစ်များကို ဖမ်းယူ နေကြသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် တွင်တရုတ် စျေးကွက် ၏ Q1 ခေါင်း ဆော င်သည် မပြောင်းလဲ ဘဲ ထိပ်ဆုံး cloud service provider ၄ ခုသည် Alibaba , Huawei, Tencent နှင့် Baidu Smart Cloud တို့၏ cloud ဌာနခွဲ များဖြစ်သည်။ ထိပ်တန်း ကုန်ပစ္စည်း ပေးသွင်း သူ (၄) ဦး သည် cloud အသုံးပြုမှု တိုးချဲ့ ခြင်းမှ အကျိုးကျေးဇူး ရရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် တရုတ်နိုင်ငံရှိ စက်မှုလုပ်ငန်း ၏စုစုပေါင်း အသုံးစရိတ် ၏ ၇၉% ရှိပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၉% တိုးတက်ခဲ့သည်။
Alicloud သည် cloud အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ဆောင်မှု ဈေးကွက် ကိုဆက်လက် ဦး ဆောင် နေပြီး ပထမ သုံးလပတ် တွင်စုစုပေါင်း အသုံးစရိတ် ၏ ၃၆. ၇% ရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၂% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ကုမၸဏီက ၎၏ ျပည္ပ သို႔ တိုးခ်ဲ႕ မႈကို စီစဥ္ ထားသည့္ အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ေနၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား တြင္ ၎၏ ေဒ တာ စင္တာ ကို တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ ေၾကာင္း မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ ေၾကညာ ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
Huawei Cloud သည်ဒုတိယ အကြီးဆုံး cloud service provider ဖြစ်ပြီး ပထမ သုံးလပတ်တွင် ၁၁% တိုးတက်ခဲ့ပြီး စျေးကွက် ဝေစု ၁၈. ၀% ရှိသည်။ Huawei ၏ terminal business (PC, smartphone, IoT) နှင့် ဂေဟစနစ် ပေါင်းစည်း ခြင်းအားဖြင့် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က “ Cloud on Cooperation” မဟာဗျူဟာ ကိုစတင် ကတည်းက ကုမ္ပဏီ ၁၀၀ ကျော်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက် များရရှိခဲ့သည်။
တတိယ အကြီးဆုံး ပံ့ပိုး သူ Tencent Cloud သည် စျေးကွက် ဝေစု ၁၅. ၇% ရှိသည်။ အဓိကအားဖြင့် ပြည်တွင်း စီးပွားရေး ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း ခြင်းနှင့် ကြီးထွားမှု မဟာဗျူဟာ များ ပြောင်းလဲ ခြင်းကြောင့် ကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ငွေသည် ယခင် သုံးလပတ် နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် အနည်းငယ် ကျဆင်းခဲ့သည်။ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် Tencent Cloud ၏ မဟာဗျူဟာမြောက် အာရုံစိုက် မှုသည် စီးပွားရေး တိုးတက်မှု ထက် အမြတ် တိုးတက်မှု သို့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲသွားသည်။
စတုတ္ထ အကြီးဆုံး ပံ့ပိုး သူ Baidu Smart Cloud သည် စျေးကွက် ဝေစု ၈. ၄% ရှိပြီး ၄၃% တိုးတက်ခဲ့သည်။ Baidu ၏ပထမ သုံးလပတ် ဘဏ္ financial ာရေး အစီရင်ခံစာအရ smart cloud ဌာန၏ ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၃. ၉ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ၈၃ သန်း) သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Alicloud သည် ဆော်ဒီအာ ရေ ဗျ တွင် ဒေတာ စင်တာ နှစ်ခု ဖွင့်လှစ်
Baidu Smart Cloud သည် Cloud ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် AI နည်းပညာ များကိုပေါင်းစပ် ခြင်း ၏အကျိုးကျေးဇူး များနှင့်အတူ စီးပွား ရေးတွင် ကြီးမားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ် နေ ခြင်းနှင့်အတူ ဤ သုံးလပတ်တွင် တိုးတက်မှု မြင့်မား ခဲ့သည်။ ဌာနခွဲ သည် ဘဏ္ cloud ာရေး တိမ် ဖြေရှင်း မှု ဈေးကွက်တွင် ထိပ်ဆုံး သုံး နေရာတွင် ရှိနေပြီး အဆက်မပြတ် တိုးတက် နေသည်။ လက်ရှိတွင် ၎င်းသည် ဘဏ္ industry ာရေး ကဏ္ in တွင် ဖောက်သည် ၅၀၀ နီးပါးကို ၀ န်ဆောင်မှု ပေးသည်။ စျေးကွက် ရှာဖွေ ရေး၊ ဘဏ္ sector ာရေး ကဏ္ from မှရရှိသော ၀ င်ငွေ များအပြင် Baidu Smart Cloud သည် ကုန် ထုတ်လုပ်မှု၊ ရေပေးဝေ မှု နှင့်စွမ်းအင် ကဏ္ in များ တွင်၎င်း၏ Kaiwu စက်မှုလုပ်ငန်း အင်တာနက် ပလက်ဖောင်း မှတစ်ဆင့် မွေးစား နှုန်း ကိုတိုးမြှင့် နေသည်။
Market Mar 25 မတ် 25, 2021